Tag: and | Sagal Radio Services
Dagaalka ganacsiga Mareykanka iyo Shiinaha oo meel adag gaaray.
Sagal Radio Services • News Report • September 1, 2019
Mareykanka ayaa sara u sii qaaday canshuurihii saarnaa badeecada Shiinaha ee loo iib geeyo dalka Mareykanka.
Sagal Radio Services • News Report • October 10, 2016
Dood u dhexeysa musharrixiinta sida adag isaga soo horjeeda ee dalka Mareykanka, Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa si toos ah TV-yada caalamka looga daawaday ay dhexmartay caawa.
Donald Trump iyo Hillary Clinton oo ku sii dhowaanaya Tartanka Musharaxnimada Madaxweynaha Mareykanka
Musharaxiinta Xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimoqraadiga Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa ku soo dhowaanaya inay u soo baxaan Tartanka Musharaxnimada Madaxweynaha Mareykanka, kadib markii guulo hor leh ka soo hoyeen gobolada waqooyi bari Mareykanka.
Mareykanka iyo Faransiiska oo Tababbaraya Ciidamada Dowladda Soomaaliya
Dalalka Mareykanka iyo Faransiiska ayaa sheegay inay tababarro siinayaan ciidamada Soomaaliya, si looga hortago weerarrada kaga imaanaya Al-shabaab oo dhawaanahan geysanaysay qaraxyo iyo dilal qorsheysan.
AMISOM iyo Mareykanka oo ka digay weeraro ka dhaca Muqdisho Ramadaanka
Sagal Radio Services • News Report • June 28, 2014
Qoraallo ay soo kala saareen AMISOM iyo Mareykanka ayaa looga digay weerarro argagaxiso oo ay Al-shabaab ka geysato magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka qaarkood inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan; iyagoo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay feejignaan dheeri ah muujintaan inta lagu jiro Ramadaanka.